Organic-mineral fatịlaịza BIO VITA "Ihe ịrịba ama Tomato": ntụziaka maka ojiji - Fatịlaịza - 2019
Organic fatịlaịza "Signor Tomato" guzosiri ike BIO VITA na-etinye dị ka ezigbo nri maka tomato na-ede ede.
Tụlee ihe mejupụtara, uru nke iji na usoro nke ime ọgwụ a.
Uru na mmetụta nke ọgwụ
Ntuziaka: usoro nke ngwa na oriri
Ngwakọta, ihe na-arụsi ọrụ ike na ntọhapụ
"Tomato Signor" - organic fatịlaịza, nke nwere ọtụtụ ihe ndị dị na kemịkal:
Nitrogen, potassium na phosphorus n'ihe ruru 1: 4: 2. Nke a dị mma maka tomato, eggplants na ose, dị ka akwụkwọ nri nke ezinụlọ nightshade na-achọsi ike na ọdịnaya nke ihe ndị a n'ala. Ojiji nke osisi "Signor Tomato" adịghị ekwe ka osisi ahụ na-eto eto karịa ka ọ dị mkpa, iji kpoo okooko osisi, ma belata ihe ize ndụ nke ịgbatị seedlings. Tụkwasị na nke a, ihe ndị a na-eme ka ndị na-eguzogide nrụgide dị iche iche, na-enye budding nke akụrụ, na mgbe e mesịrị - na-eto eto n'oge na-amị mkpụrụ. Potassium na-ejupụta mkpụrụ ahụ, na-abawanye uru ha bara.
Ị ma? Nkọwa nke mbụ nke nri fatịlaịza mere site na agronomist, ọkà mmụta sayensị na onye nwe ụlọ Columella (1st afọ AD.). N'okwu ya, o jikọtara ahụmahụ nke ndị ọrụ ugbo na narị afọ gara aga. A kewara ndị nri niile n'ime ụzọ ise ise: nri, mineral na green fatịlaịza, composts na "ala".
Humic acid. Ha nwere mmetụta dị mma na ala, na-eme ka ọrụ ya na mmezigharị rụọ ọrụ ya. Ihe a nile na - eme ka mgbochi nke osisi gaa na ọrịa dịgasị iche iche ma mee ka ntinye nke nri site na mgbọrọgwụ mee ka ọ dị mma. N'ihi ya, ha na-etolite ma na-amị mkpụrụ dị elu.
Ihe nje bacteria nke genus Azotobacter. Ha nwere uru dị ukwuu maka mweghachi nke usoro ihe ọkụkụ na ala ma mee ka nri dịkwuo. Nje bacteria ndị a na-enye ala ndị yiri ihe ndị na-enye aka na-eme ka mgbọrọgwụ siri ike, kamakwa ịbawanye iguzogide oyi na ire ere. Tụkwasị na nke a, ha nwere ikike iji nweta nitrogen sitere na mbara igwe ma gbanwee ya na ụdị nke dị na osisi.
Ndokwa ga-aba uru maka osisi ndị ọzọ dị n'ubi gị: Biohumus, Boric acid, Vympel, Stimulus, Iskra Zolotaya, Na-adị ọcha, Fundazol, Fufon, Ground, na Bud "," Aktellik "," Karbofos "," Confidor "," Commander "," Aktara "," Bi-58 ".
Nke a na ihe ndị dị na nri na-adabara na ọ bụghị nanị maka mkpụrụ osisi na-edozi ahụ, kamakwa maka mkpụrụ osisi na osisi. Dika ihe eji eme ihe dika fatịlaịza maka akwukwo nke akwukwo na tomato, o puru ikpochapu oke nitrogenous juputara na ya, nakwa ncha ala na nitrates.
"Tomato Signor" na-emepụta n'ụdị uzuzu ma tinye ya na bọket plastik nwere ikike nke 1 l.
Fatịlaịza "Tomato Signor" na-enye ohere iji rụpụta ihe na-arụpụta nke ọma na kụrụ akwụkwọ nri ma nwee nlezianya dị mma. Mkpụrụ ọgwụ na-ebelata mkpa maka nchekwa ngwaahịa, ma n'ihi enweghị oke nitrogen, ọbụna n'ọnọdụ ihu igwe na-adịghị mma, nitrates agaghị agbakọta.
Ọ dị mkpa! Iji mee ka o doo anya na owuwe ihe ubi a ga-eme n'ọdịnihu, a na-atụ aro ka ị kwụsị ihe oriri ọ bụla ọzọ ụbọchị 20 tupu ewepụ mkpụrụ ahụ.
E gosipụtara na mmetụta nke iji ọgwụ ahụ eme ihe gụnyere ihe ndị na-esonụ:
ọnụ ọgụgụ nke ndụ lanarị na-aba ụba;
fatịlaịza na-enyere aka na eto eto;
na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke nje bacteria na dịkwa ka ha si merie;
eme ka mkpụrụ nke tomato na tomato pụta.
mkpụrụ ripening accelerates;
na-ebelata ego nitrates na ihe ubi ahu;
a na-ebelata ihe nfe na-edozi ihe na ntinye ha site na osisi na-abawanye.
Ndị a na-eme nri maka tomato na osisi ndị ọzọ nke ezinụlọ nightshade, nke na-abanye n'ime ha, kewara n'etiti mgbọrọgwụ na ntọhapụ nke ethylene. N'elu ọkwa cell, ihe a na-enyere aka ịhazi mmepe. Tụkwasị na nke ahụ, a na-eme mkpalite nke njikọ nke lignin, cellulose na sugars. Nile nke a na-eduga ná osooso nke mkpụrụ ripening.
Ị ma? Mbụ e kwuru maka iji ọgwụ nri eme ihe bụ ọrụ nke Theophrastus si Heres (c 372 BC). N'akwụkwọ ya, o kwuru na ọ dị mkpa ka eji ejiji dị otú ahụ maka ihe ọkụkụ niile.
Fatịlaịza "Tomato Signor" nwere ntụziaka ndị a maka iji:
Iji dozie ala maka seedlings mix 3 tablespoons nke fatịlaịza na 5 lita ala. Ihe niile edozi nke oma na mmiri.
Maka ịkụ mkpụrụ osisi na ebe na-adịgide adịgide ọ na-atụ aro ka ịme ihe ndị na-esonụ: 20 g nke "Signor Tomato" na-agbanye n'ime oghere wee jikọta ya n'ala. Mgbe a kụrụ, a na-mmiri mmiri ọkụ.
A na-etinye mgbakwasa mgbakwasị elu na nke a: a na-atụba pasent 5 nke ọgwụ ahụ n'ime lita 10 nke mmiri ma gwakọta ya nke ọma. Ịhapụ ịjụ ọnwụ maka ọ dịkarịa ala awa atọ, mgbe ahụ, a ga-eme ka ngwọta na-esi na ya pụta na mgbọrọgwụ osisi ahụ. A na-atụ aro ka otu osisi jiri ọ dịkarịa ala 1 liter n'elu mgbakwasa. Ugboro ugboro nri - 1 oge kwa izu.
Ọ dị mkpa! Ebe ọ bụ na ihe ndị ahụ nwere ngwakọta nke peat na mgbakwunye nke organic substrates, yana macro-na microelements na acids humic, ọ dị ezigbo mkpa idebe iwu, karịsịa, iji mee ka mgbakwasa oge ma mara mgbe niile, iji nweta ihe kachasị.
Dị ka a ga-ahụ site na n'elu, na Signor Tomato bio-fatịlaịza maka tomato na osisi ndị ọzọ ga-ebuwanye ibu na-amịpụta mkpụrụ, nke pụtara na mgbalị ndị a na-eji arụ ọrụ agaghị eji n'efu.
Barnevelder: niile gbasara ịzụlite otu ụdị Dutch ọkụ ọkụ n'ụlọ
Polycarbonate Greenhouse Mee N'onwe Gị
Myxomatosis nke rabbits: ihe dị ize ndụ, ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, ọgwụgwọ ụlọ
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Technology nke ngwa nke organic fatịlaịza "Signor Tomato"